Huashan Chipatara chakabatana neFudan University - Shenzhen Doneax Science uye Technology CO., LTD
Huashan Hospital yakabatana neFudan University
Huashan Hospital yakabatana neFudan University iri muShanghai, inovhara nzvimbo ingangoita makumi mashanu mu. Yakavambwa mu1907. Icho chechitatu-chikamu chakazara chipatara chinosanganisa mushonga, kudzidzisa uye kutsvagisa, uye yakasarudzika unit yeinishuwarenzi yekurapa muShanghai.
Chipatara chine gumi dzakakosha kuraira: neurosurgery, kuvhiya kwemaoko, Neurology, Epidemiology, Clinical Yakabatanidzwa yechinyakare Chinese neWestern Medicine, Urology, Nephrology, Cardiovascular department, Imaging Medicine neNuclear Medicine, uye General kuvhiyiwa. Orthopedics, ukoti, rabhoritari, yakakosha rabhoritari (ruoko rwekuvhiya), kiyi rabhoritari (maantibhakitiriya), endocrinology, neurosurgery, ruoko kuvhiya, neurology, echinyakare Chinese mushonga (mapapu chirwere), dermatology, urology, nephrology, kuvhiya, gastroenterology, oncology, hutachiona, mushonga wekuvandudza, mushonga wemitambo, kufungidzira kwekurapa makumi maviri ehunyanzvi. Kune 7 kiriniki yemhando yepamusoro yekudzora nzvimbo mune yekiriniki chemishonga, neurology, dermatology, laser Therapy, mushonga we nyukireya, basa rekuongorora chirwere uye neurosurgery, 1 WHO yekutsvagisa uye yekudzidzisa kubatana nzvimbo, uye angangoita makumi maviri emarabhoritari akakosha, akasiyana masosi ekutsvagisa uye nzvimbo.
Chipatara chine 1216 yakatenderwa mabhedha, akashongedzerwa neiyo yepamusoro-tsanangudzo PET / CT, 3.0intraoperative magnetic resonance, radiosurgery, gamma banga, 256rows yeTCT, SPECT, DSA, electron beam imaging system (EBIS), color Doppler ultrasound system, ammonia banga, ultrasonic banga, X-banga, kuvhunduka wave lithotripter, Linear accelerator uye zvimwe zvekurapa zvekushandisa.
Musi waZvita 4, 2018, yakaziviswa neNational Health Commission seboka rekutanga rezvakawanda-chirango bundu kuongororwa uye kurapwa zvipatara zvekutyaira.
MunaGunyana 2020, iyo Shanghai Municipal Party Party neHurumende yeMasipala vakasarudza kuipa zita rekuti "Shanghai Advanced Group mukurwisa denda re COVID-19".